Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Galmudug | KEYDMEDIA ONLINE
Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Galmudug
Xaaladda Amni ee degaannada dhawaan ay la wareegeen Urur-ka Ahlu-sunna, ayaa ka nastahan sidii la filayay, mana jiro wax tallaabo ah oo uu qaaday maamulka Galmudug.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Urur-ka Ahlu-sunna Wal-jamaaca, ayaa maalintii Saddexaad gacanta ku haya magaalooyinka Ceel-dheere, Mataban iyo Guriceel, kadib markii ay dagaal la’aan kula wareegeen degaanka 1 October 2021, markii ay isaga baxeen ciidamada Galmudug.
Wararka saaka ka imaanaya degaannada ka baxay gacanta Galmudug, ayaa sheegaya in xaaladdoodu degan tahay, isla-markaana aysan jirin cabsi gooni ah oo laga qabo, dagaallo hore loo saadaalinayay in ay ka dhacaan degaannada uu ugu horreeyo Guriceel.
Dhanka Galmudug: Ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan Xooga Dalka iyo booliska loo yaqaan Haramcad ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay la geeyay Dhuusamareeb, waxaana dib boorka looga jafay ciidamada Qaybta 21-ad ee Xoogga, kuwaas oo fadhigoodu yahay degaannada Maamulka.
Dhanka Ahlu-sunna: Koox diimeedka hubeysan ee Ahlu-sunna (Suufi), ayaa wadda ciidan qorosho xooggan, waxayna shalay magaalada Guriceel ku soo bandhigeen wadaaddadii dugsiyada Qur’aanka oo ku dhawaaaqay in ay hubka qaaten si ay u difaacaan Sh. Shaakir iyo M. Maxamuud.
Waxaa maantii labaad gebi ahaanba xiran howlihii duulimaadyada ee garoonka diyaaradaha magaalada Guriceel ee Jeneraal Galaal, duulimaadyadi tagi jiray Guriceel, ayaa u wareegay dhanka magaalo madaxda Gobolka ee Dhuusamareeb.
Xildhibannada iyo Wasiiradda.
Qayb ka mid ah Xildhibannada iyo Wasiiradda heer Federaal iyo Heer Dowlad goboleedba, ku matala degaannada ka baxay gacanta Galmudug, oo shalay shir jaraa’id ku qabtay Dhuusamareeb, ayaa hoggaanka Suufida ku eedeeyay in ay muhkilad ku yihiin horumarka degaannada Maamulka, isla-markaana ay dano gaar ah doonayaan in ay u burburiyaan Galmudug oo dhan.
Mahad Maxamed Salaad (Xildhibaan hore) iyo Sanatar Cabdixakiin Macallin Axmad, oo ka mid ahaa xubnaha Shaakir iyo Maxamuud eedda u jeediyay, ayaa hoggaanka Galmudug iyo guud ahaan bulshada ugu baaqay in gacan bir ah lagu qabto Kooxda Suufida inta aysan ku ballaaran degaanka.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, Borofesoor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac, oo ah hoggaanka dhaqanka beesha Habargidir, Siyaasiyiinta ka soo jeedda degaanka, Madaxweynayaashii hore, waxgaradka iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee bulshada Galmudug, ayaa diraya baaq nabadeed, waxayna labada daraf ku boorinayaan in laga baaqsado dagaal xaaladda uga sii dara.
Inkasta oo aysan wali muuqan waan-waan nabadeed oo u dhexeysa maamulka Galmudug iyo Ahlu-sunna, isla-markaana uusan wali xaaladda soo cusboonaatay ka hadlin Madaxweyneaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), ayaa hadana la soo sheegayaa in Maamulka MW Qoorqoor uu wado dadaalo nabadeed oo xal aan xabbad ahayn lagu wajahayo koox diimeedka hubeysan.